ဇာနီကြီး – မြန်မာ့စစ်တပ်ကို ဝေဖန်ပြစ်တင်မလား၊ အားပေးမြှင့်တင်မှာလား – MoeMaKa Burmese News & Media
မြန်မာ့စစ်တပ်ကို ဝေဖန်ပြစ်တင်မလား၊ အားပေးမြှင့်တင်မှာလား
Photo © asiancorrespondent.com
နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများ အားလုံးနီးပါးကို ထိမ်းချုပ်ထားသော ဦးပိုင်အဖွဲ့ကို စစ်ဗိုလ်ဟောင်းကြီးများက စီမံအုပ်ချုပ်နေသည်။ ပြင်ပရှိ စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ကြီးများသည်လည်း စစ်ဗိုလ်ဟောင်းကြီးများ၏ ခရိုနီစီးပွားသမားများက လက်ဝါးအုပ်ထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများ၊ အစိုးရစီးပွားရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့များက နိုင်ငံဘဏ္ဍငွေ (ပြည်သူလူထုပိုက်ဆံ) ကိုင်တွယ်သုံးစွဲနေကြပါသည်။ ထိုအစိုးရ ဆိုသည့် အာဏာကိုရရှိသောအုပ်စုသည် နိုင်ငံကြီးပွားတိုးတက်ရေးကိုလုပ်ဆောင်မည်ဟု အသံကျယ်လောာင်စွာပြောကြသည်။ လူထုကြီးသည် လက်ရှိ သမ္မတ၊ ဒုသမ္မတများ၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဌများကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အားကိုးသကဲ့သို့ ယုံကြည်စွာ အားကိုးကြပါသည်။ အထူးသဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများသည် ရုတ်တရက်မမျှော်လင့်ပဲရရှိသော ပင်စင်လစာငွေကြောင့် ရှိခိုးမတတ်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်။ ကောင်းပါသည်။ အစိုးရအဖွဲ့သည် မိုက်ကရို၊ မက်ကရို စီးပွားရေးစီမံကိန်းများဖြင့် ရေရှည်၊ ဥပဒေများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦးများကို အုတ်မြစ်ချနေချိန်ဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်အခိုက်တံ့အတွင်း မသမာသူ၊ ဝိသမသမားများက ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်ပေါင်းပြီး ရသရွေ့၊ ဥပဒေဘောင်တွင်း၊ ဘောင်ပြင်ပ .. ခပ်ပြောင်ပြောင်လုပ်ကိုင်မှုများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများထက် အခြေခံဈေးနှုန်းများ ၂ဆ၊ ၃ဆ ဈေးကြီးသွားရသည်။ ဥပမာ ဘိလပ်မြေ၊ သံ၊ အ်ိမ်ခြံမြေ၊ ပါမစ်လိုင်စင်ကြေးများဖြင့် လက်ဝါးကြီးအုပ်စီးပွားရေးစနစ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အပြစ်ဒဏ်မပေးသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကောင်းဖက်တွင်ကြည့်ပါက ကားလမ်းကြီးများ ကောင်းလာသည်။ ကုန်ကား၊လူစီးကားများ ဈေးချိုလာသည်။ တယ်လီဖုန်း၊အင်တာနက် အလွယ်တကူရနိုင်သည်။ အံ့သြစရာအကောင်းဆုံးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အင်အယ်ဒီပါတီ၊ လွှတ်တော်ထဲရောက်လာပြီး၊ ပွင့်လင်းလွန်းလှသော မီဒီယာပုံနှိပ်စနစ်ဖြင့် အစိုးရအဟောင်း၊အသစ် ခေါင်းဆောင်အားလုံးကို ဝေဖန်ရေးသားခွင့်ပေးလာခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတွင် အာဏာခွဲဝေမပေးမှုကြောင့် အစိုးရသစ်သည် အကြပ်အတည်းများစွာတွေ့ရသည်။ အထူးသဖြင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရသည် စစ်တပ်နှင့်အစိုးရဌာဆိုင်ရာများကို ပိုင်နိုင်စွာကိုင်တွယ်ထားနိုင်သည်။ လွှတ်တော်၂ရပ်ကိုအုပ်ချုပ်သူ ဦးရွှေမန်းနှင့်အုပ်စုသည် သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွင်း အာဏာယှဉ်ပြိုင်မှု ကြီးထွားနေပါသည်။ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း လွှတ်တော်အုပ်စုအတွင်းမှ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို ဖိအားပေးနေပါသည်။ လက်ရှိ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်၏ ဖိအားသည် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကို အမြန်ဆုံးလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ အစိုးရအဖွဲ့နှင့်တစ်လုံးတစ်ဝတည်း ရှိသည် ဟု ယူဆရသော တပ်မတော်၊ကိုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စည်းရုံးရေးများ လုပ်နေပါသည်။
အခြားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများကဲ့သို့ Institution အင်စတီကျူးရှင်းဟုခေါ်သော အဖွဲ့အစည်းများ မြန်မာပြည်တွင်အင်အားမရှိပါ။ ရှေ့နေအဖွဲ့ ချုပ်၊ စစ်မှုထမ်းအဖွဲ့ချုပ်၊ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်အဖွဲ့၊ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ၊..စသည့် အင်စတီကျူးရှင်းများသည် မြန်မာပြည်တွင် အင်အားမရှိပါ။ တစ်ခုတည်းသော အင်စတီကျူးရှင်းမှာ စစ်တပ် (တပ်မတော်) ဖြစ်ပါသည်။ စစ်သား၊စစ်ဗိုလ်များသည်
– နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက် နံပါတ်(၁)ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်
– စည်းကမ်းနှင့်နေထိုင်သည်။ အမိန့်နာခံသည်
– မယားငယ်ထားခွင့်မရှိ၊ လောင်းကစားခြင်း၊ လာဘ် ကိစ္စများကင်းရှင်းရသည်။
– စစ်သား၊စစ်ဗိုလ်နှင့်မိသားစု စားဝတ်နေရေးကို စစ်တပ်မှတာဝန်ယူသည်။ အရပ်အဖွဲ့နှင့်ကင်းဝေးစေသည်။
– လွှတ်တော်တွင်၂၅% ရှိနေသည်။
– လွတ်တော်မှအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများတွင် လက်ရှိစစ်ဗိုလ်များကိုခန့်ထားသည်။
– အစိုးရအဖွဲ့နှင့်လွှတ်တော်တွင် စစ်ဗိုလ်ဟောင်းများနှင့်စစ်ဗိုလ်သစ်များ ၉၀% ကြီးစိုးနေသည်။
– ဌာနဆိုင်ရာနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာများတွင် စစ်ဗိုလ်ဟောင်းကြီးများ ၉၀% ကြီးစိုးနေသည်။
စစ်ဗိုလ်ဟောင်းများက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ၉၀%ကို ကြီးစိုးနေပြီး၊ စစ်ဗိုလ်သစ်များက နိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းပိုင်ခွင့် အခွင့်ရေးကိုရထားသည်။ စစ်ဗိုလ်ဟောင်းများနှင့် စစ်ဗိုလ်သစ်များက ပူးပေါင်းပြီး အာဏာထိန်းချုပ်သွားမည့် အလားအလာဖြစ်နေပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်သော ပြည်သူလူထုသည်၊ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်အများစု ပါဝင်သော လွှတ်တော် အတွင်းနည်း၊ အပြင်နည်းများဖြင့် အာဏာအရှိဆုံး စစ်တပ် (အင်စတီကျူးရှင်း) ကို စည်းရုံးနေရခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်တပ်မှ စစ်ဗိုလ်အသစ်များ သည် အချုပ်အခြာအာဏာ သိမ်းခွင့်ရှိသော်လည်း လက်ရှိအစိုးရ၏ အရိပ်အောက်တွင် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုလက်ရှိအစိုးရ (စစ်ဗိုလ် ဟောင်းကြီးများ) အရိပ်အောက်မှ လွတ်လမ်းကို ရှာဖွေကြည့်ရာတွင်
၁။ Good Attitude စစ်ဗိုလ်ကောင်းများကို တိုင်းပြည်အတွက် သတ္တိရှိလာရန် မြှင့်တင်ပေးရမည်။ စစ်ဗိုလ်၊စစ်သားများ စားဝတ်နေရေး ပြေလည်ရေးအတွက်၊ ကူညီပေးရမည်။ (အိမ်ခြံမြေ ပေါ်ပင်လုပ်ငန်း၊ ပွဲစားအလုပ်များ ပပျောက်အောင်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်)။
၂။ အနောက်နိုင်ငံများ အထူးသဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အာစီယံနိုင်ငံများနှင့် စစ်ရေးပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု များစွာလုပ်ပေးရမည်။ အနောက်နိုင်ငံသို့ စစ်ပညာသင်မလွှတ်နိုင်လျှင်ပင် အာစီယံနိုင်ငံများသို့ ရက်ရှည်၊ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ လွှတ်ပေးရပါမည်။ (မြန်မာအစိုးရက နှစ်စဉ်ဒေါ်လာဘီလျှံပေါင်းများစွာဖြင့် စစ်လက်နက်များကို ရုရှား၊ ယူကရိန်းမှ ဝယ်ယူနေသဖြင့်၊ မြန်မာစစ်ဗိုလ် အမြောက်အများသည် ရုရှား၊ ယူကရိန်းသို့ ပညာသင်စေလွှတ်နေရသည်)။
အထက်ပါ၂ချက်ကို တာဝန်သိ၊ ပြည်သူများ မည်သို့ကူညီပေးနိုင်သနည်း။ စစ်တပ်ကို အပြစ်တင်၊ အတင်းကြပ် စည်းရုံးခြင်းနည်းလမ်းမှာ အောင်မြင်ရန်မလွယ်လှပါ။ စည်းရုံးရေးနည်းလမ်းမှာ အာဏာနှင့်ငွေ ကြွယ်ဝနေသော အစိုးရသစ်နှင့် စစ်ဗိုလ်ဟောင်းကြီးများက အားသာလျှက်ရှိသည်။
မြန်မာပြည်အစိုးရ၏ အဓိကအာဏာကို စစ်တပ်သဘောတူမှုဖြင့် ထိမ်းချုပ်ထားသည်။ အမြင့်ဆုံး အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွင် ၉၀%သည် ဗိုလ်များဖြစ်သည်။ လက်ရှိစစ်ဗိုလ်၎ဦးနှင့် စစ်ဗိုလ်ဟောင်ကြီး ၅ဦးတို့က အာဏာ ထိမ်းထားသည်။ စစ်ဗိုလ်ဟောင်းများစွာလည်း မပူပင်ရသည့် အိမ်ခြံမြေ၊ လုပ်ငန်းများ ရရှိပြီးဖြစ်သည်။ တသက်စာ လုံလောက်လှပါသည်။
လက်ရှိစစ်တပ် ကာ/ချုပ်သည် လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့နှင့်တစ်သားတည်းရှိသည်။ လွှတ်တော်ဥက္ကဌအဖွဲ့နှင့်ဝေးဝေးတွင်ရှိသည်။
လွှတ်တော်တွင်လည်း ၂၅% ကို စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်များက နေရာယူထားသည်။ စစ်တပ်သဘောမတူပဲ မည်သည့်နည်းနှင့်မှ ၇၅% ထောက်ခံမဲမရနိုင်တော့ပါ။
ရွေးချယ်တင်မြောက်ရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဌသည် အစိုးရအဖွဲ့နှင့်တစ်သားတည်းဖြစ်ပြီး၊ ရွေးချယ်ကော်မရှင်ညွန်ကြားရေးမှုး၊ လထညွန်မှူး အား လုံးနီးပါး ၁၀၀ကျော်သည် လက်ရှိစစ်ဗိုလ်များဖြစ်သည်။
အဆုံးသပ်ပြောရလျှင် စစ်ဗိုလ်ဟောင်းများက နိုင်ငံတော် အာဏာနှင့်စီးပွားရေး အားလုံးနီးပါးကို လက်ဝါးအုပ်ထားဆဲဖြစ်သည်။
သို့သော် စစ်တပ်မှ စစ်သားကောင်းကြီးများသည် အမှန်တရားနှင့် တိုင်းပြည်အနာဂါတ် သာယာသောလူဘောင်သစ်အတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။ မြန်မာပြည်အတွက် စိတ်ရင်းစေတနာရှိသော သူများအားလုံးကို မေးမြန်းကြည့်ရာတွင် စစ်တပ်က၊ စစ်တပ်အလုပ်လုပ်လျင် တိုင်းပြည်တိုးတက်မည် ..ဟု ဖြေကြပါသည်။ စစ်တပ်ကို အပြုသဘော အကြံပေးသူများစွာ ရှိရမည်..ဟု မှတ်ချက်ပေးကြသည်။ လက်ရှိ မေ-၂၀၁၄ တွင် ထိုင်းနိုင်ငံစစ်တပ်က ရှုပ်ထွေးနေသောနိုင်ငံရေးပြသနာကို ဖြေရှင်းရန် စစ်အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် နိုင်ငံစီးပွားရေးမှာ ပြောင်းမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံရောက်နေသော မြန်မာအလုပ်သမား ၄သန်းခန့်သည်လည်း ပြန်လာစရာမလိုပါ။ မတတ်သာသောကြောင့် စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းရသည်။ နောက် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာရှင်ဟောင်းကြီးများလို အာဏာကိုရာသက်ပန် သိမ်းထားမည်မဟုတ်ပါ။
စစ်တပ် အရာရှိများသည် စစ်လုပ်ငန်းကိုသာ မပူပင်မကြောင့်ကျ လုပ်ကိုင်ရန် လမ်းဖွင့်ပေးရပါမည်။ စစ်ပညာဂျာနယ်များကို များများထုတ်ဝေရမည်။ စစ်ဗိုလ်ဟောင်းကြီးများအား လက်ရှိစစ်ဗိုလ်များက သွားရောက်ဂါရဝပြုခြင်းများ အလေ့ကျင့်မလုပ်ဖို့လိုသည်။ စစ်ဗိုလ်ကောင်းနှင့်စစ်ဗိုလ်ဆိုး ခွဲထုတ်၊ စီစစ်နိုင်ရန် မီဒီယာများက ပြည်သူများအား ဖေါ်ထုတ်ရေးသားရမည်။ အရောင်းကောင်း ဂျာနယ်ဖြစ်ရန် စစ်ဗိုလ်ဆိုးချည်း ထုတ်ဖေါ်ရေးသားမှုမှ စစ်ဗိုလ်ကောင်းများကို သူတို့ရာထူးမပြုတ်အောင် ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကြဖို့ အထူးလိုအပ်ပါသည်။ လက်ရှိ လွှတ်တော်တွင်ရှိနေသော ဦးရွှေမန်း၊ ဦးခင်အောင်မြင့်၊ ဦးသူရအောင်ကို စသည့် ကြံခိုင်ရေးပါတီဝင်များ နှင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရအဖွဲ့မှ ဝန်ကြီးများဖြစ်သော ဦးဝင်းရှိန်၊ ဦးကံဇော် .စသည်တို့နှင့် အရည်ချင်းရှိသော ဒုဝန်ကြီးများစွာတို့ကို ဝေဖန်စာများထက်၊ အားပေးစာများ ရေးသင့်ပါသည်။ ဝေဖန်လိုက်ကြည့်ပါက ဦးစိုးသိမ်း၊ ဦးအောင်မင်း …စသည့် ဝန်ကြီးများလည်း အပြစ်တွေချည်းသာ ဖြစ်သည်။ လူဆိုသည်မှာ ကုသိုလ်တပဲ၊ ငရဲတပိသာ မဟုတ်ပါလား…။
တကယ်တော့ အစိုးရ စိတ်ဆန္ဒရှိလျှင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များနှင့် စစ်တပ်ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ မခက်ခဲပါ။ ယုံကြည်မှုမရှိသောကြောင့် ပြည်တွင်းစစ်နှစ်၆၀ ကြာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အလားတူ အင်စတီကျူးရှင်းကြီး တစ်ခုဖြစ်သော မြန်မာ့တပ်မတော်အရာရှိကြီးများတွင် လက်ရှိ၊ ကာ/ချုပ်၊ ဒု-ကာ/ချုပ်များ၊ တိုင်းမှုးများကို လေးစားစွာ အားပေးစာများ မီဒီယာများက ဖေါ်ပြသင့်ပါသည်။ ကာချုပ်မှ တပ်သိမ်းမြေများစွာ ပြန်ပေးခြင်း အစီအစဉ်ကို ကြိုဆိုရပါမည်။ စစ်တပ်ဘတ်ဂျတ်သည် တမျိုးသားလုံးထုတ်ကုန်၏ ၁၇% ဟုကြေငြာသည်ကိုလဲ လေးစားရပါမည်။ ကလေးစစ်သားပပျောက်ရေးကို အင်ဂျီအိုများအကူညီဖြင့် လုပ်ဆောင်နေခြင်းကို ဂုဏ်ပြုရပါမည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တိုင်းမှုးက မီဒီယာနှင့်ရဲဝံ့စွာ အင်တာဗျူးခံခြင်းကိုလည်း ချီးကျူးရပေမည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ခေတ်စနစ်ပြောင်းနေချိန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အင်အယ်ဒီ ကလွဲရင် ဗိုလ်ဟူသမျှ၊ ကြံ့ဖွံ့ဟူသမျှ ကန့်ကွက်နေဆဲ ဆိုပါက ကျန်ုပ် ခေတ်နောက်ကျ ကျန်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ချီးမွှမ်းသင့်သူကိုတော့ ချီးမွမ်းရပါမည်။ မဲပေးသည့်အခါတော့ စစ်တပ်၊ စစ်သားအမတ်ကိုမဲမပေးလဲ ရသည့် ခေတ်ကာလဖြစ်ပါသည်။ သေချာသည်မှာ စီးပွားကျွန်ဘဝမရောက်အောင်၊ ပြည်ပရန်ကာကွယ်ဖို့ ခေတ်မီစည်းကမ်းရှိသော၊ ညီညွတ်သော၊ အင်အားရှိသော ပြည်ထောင်စုစစ်တပ်ကြီး တခု မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းနယ်စပ်တွင် အခိုင်အမာရှိနေဖို့ အလွန်လိုအပ်နေချိန်ဖြစ်သည်။
စစ်တပ်ကို ဝေဖန်ပြစ်တင်မလား၊ အားပေးမြှင့်တင်မှာလား….?
← အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) – ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ
ကာတွန်း လိုင်လုဏ် – အခမဲ့ပညာရေးစနစ် →
February 14, 2019 Aung Htet
October 8, 2018 October 9, 2018 Aung Htet
2 thoughts on “ဇာနီကြီး – မြန်မာ့စစ်တပ်ကို ဝေဖန်ပြစ်တင်မလား၊ အားပေးမြှင့်တင်မှာလား”
U Kyaw Mya Than says:
it is case-by-case basis consideration.
And even in one case, it can be both ‘ positive appraisal and negative appraisal ‘ . Bluntly speaking …’ Well done ‘ ……..or ‘ Damn it – do it better and do it again . M F ‘ .
So who is going to do it? There must always beaOMBUDSMAN organization to ‘ watch ‘ and ‘ ‘ step on their feet ‘ ( tap their shoulder + or whatever we call it.
if too dangerous and obnoxious, Jail them and Cane them and Freeze them. and may be kill them.
I am Kyaw Mya Than . I am waiting @ the gallow. Who will come and see me first ?
Htwe H Paing says:
They will not change their attitude. See what Min Aung Hlaing has been doing!